Malagasy nahazo traikefa amin’ny fiarovana manan-kaja amin’ny fomba iraisam-pirenena teto Égypte – Gasy Egypte
Anisan'ny nandalo teto Egypte vao tsy ela i Chef Rico izay garde ao amin'ny présidence, sy i chef Helly izay miasa ao amin'ny GSIS (Groupe de Sécurité et d'Intervention Speciale) ao Ivato Antananarivo. Tonga nanao fiofanana momba ny fiarovana manankaja, amin'ny fomba iraisam-pirenena sy manara-penitra izy ireo nandritra ny roa volana latsaka kely.
I Chef Helly, mitafy ny fitafian'ny zandarimarian-pirenena Malagasy manoloana ireo Manankaja Egyptiana
Mizara tokoa ny fahaiza-manao ny fanjakana egyptiana amin'izao fotoana, ka manasa ireo manan-kaja manerana ny Afrika sy ny tany hafa mba ho tonga hiofana eto amin`ny taniny. Somary mafimafy ny fikotranana sy ny fiofanana hoy izy roa mirahalahy ireo, kanefa isaorana an'Andriamanitra fa tontosa soa aman-tsara hatramin`ny farany. Ary nahazo traikefa tokoa izy ireo mba hampiarina sy ampiasaina amin'ny asa izay iandraiketany any antanin-drazana ary koa hampitaina amin`ireo miara-miasa aminy.
Nanatsipy hafatra koa vitsivitsy izy ireo ho amin`ny malagasy eto egypte, dia ny hitazomana ny fifankatiavana. Ho antsika izay mila ravin'ahitra aty antany lavitra hoy izy dia tsara ny mitazona ny fifankatiavana izay efa ananantsika eto, fa izany dia anisan`ny soatoavina maha-malagasy atsika ary mampiavaka atsika amin`ny firenen-kafa.
8 Thoughts to “Malagasy nahazo traikefa amin’ny fiarovana manan-kaja amin’ny fomba iraisam-pirenena teto Égypte”
Discount Online Cialis buy generic cialis Clobetasol Low Price With Free Shipping. Discount Generic Clobetasol Internet Quick Shipping Price Riverside
Amoxicillin Tooth Infection Dose Xenical Orlistat Buy Online Uk Priligy Dernieres Nouvelles Clomid Pills For Sale Priligy 30 Mg Kaufen Cialis Online Tadalafil
Achat Viagra Site Us En Ligne Canada Purchase Medicine viagra Cialis 20 Mg Order
Viagra Originalverpackung Can I Order Celebrex From Canada Permethrin Over The Counter Cvs cheapest cialis Jelly Viagra Kamagra Tablets Purchase Celexa
Cialis Que Hace Viagra Mode Emploi cialis 5mg Commander Viagra Quebec
Buy Viagra Online Malaysia Viagra Nebenwirkungen Bluthochdruck cialis canada Levitra 5 Mg Contro L Impotenza Zithromax Tooth Infection
Keflex Shelf Life Mexican Pharmacy Online Buy п»їcialis Viagra Comprare Sicuro
Propaganda De Kamagra Brand Cialis For 3.92 Us Online Order Ed Pills viagra Viagra Sur Femme Cialis Generique Efficace Wirkung Viagra Samenerguss